NUGEN Audio Announces SigMod Software Update at AES 2019 | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NUGEN Audio သည် AES 2019 တွင် SigMod Software Update ကိုကြေငြာခဲ့သည်
New York, အောကျတိုဘာ 14, 2019 - NUGEN အသံ AES 2019 တွင်နောက်ဆုံးပေါ် SigMod ဆော့ဝဲလ် plug-in update ကိုပြသသည်။Booth 504I - လွန်စွာလိုလားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Pavilion) ။ အသစ်ပြောင်းခြင်းသည် SigMod အား Insert module ၏သာဓကများစွာကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုထားပြီး third-party VST2 နှင့် AU plug-in များအတွက် hosting support ကိုပါထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သော plug-in များကိုအထူးသဖြင့်ရယူနိုင်စေပြီးအထူးသဖြင့်ကန့်သတ် plug-in ပုံစံများကိုထောက်ပံ့သော DAW များတွင် - မည်သည့်စတီရီယိုသို့မဟုတ် multi-mono plug-in များအတွက်အလယ်ပိုင်း / ဘေးထွက်လုပ်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုများပိုမိုရရှိစေနိုင်သည်။
Insert module အတွက်ကုမ္ပဏီသည်စိုစွတ်သော / ခြောက်သွေ့သောထိန်းချုပ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် AUX send ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏ effecting signal ကိုမူရင်းအသံနှင့်ရောစပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ Search Bar လုပ်ဆောင်ချက်အပါအ ၀ င် third-party plug-in များအတွက်လမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်မှုများတိုးတက်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုနာမည်ဖြင့်စီစစ်နိုင်ပြီးထိရောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူစေသည်။
NUGEN ၏ SigMod software သည် plug-in နှင့် DAW ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန် 12 single-process module များပါ ၀ င်သောရိုးရှင်းသောအချက်ပြတည်ဆောက်ပုံ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းနှင့်အသံများကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရရှိနိုင်သည့် module များအကြား Mid / side ပါဝင်သည်; ကာကွယ်သည်; ထိပုတ်ပါ; crossover; ထည့်ပါ - ယခု VST2 /3နှင့် AU; တိတ်ဆိတ် / တစ်ကိုယ်တော်; ချုံ့ Switch; DC က Off-Set; မိုနို၊ အဆင့် နှင့်နှောင့်နှေး။
ဤ modules တော်တော်များများသည်အချို့သော DAW များတွင်ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ရယူရန်ခက်ခဲသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလွယ်ကူစွာရနိုင်သည်။ SigMod ၏ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော signal routing ဖြင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆော့ (ဖ်) ဝဲကို 2- နှင့် 3-bit ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးရှိ AAX, VST 32 / 64, AU နှင့် AudioSuite ပုံစံများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Mac နှင့် Windows OS နှစ်ခုလုံးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
NUGEN Audio ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Paul Tapper က“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SigMod VST2 ကိုငါတို့နည်းပညာ၏ရှေ့တန်းမှဆက်လက် ဦး ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောပုံသက်သေကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအသံပညာရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားသူတို့၏ဖန်တီးမှုမျှော်မှန်းချက်အပြည့်အဝကိုအချိန်နှင့်ရလဒ်ကို ဦး တည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ AES မှာအသံ pros နဲ့စကားပြောဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ”
NUGEN အသံဟာအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်လည် upmixing နှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အသံကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, မီတာနဲ့ content ရှာမှီးခြင်းမှပလေးအောက်ကိုမှ ဖြတ်. ဆုံးမပဲ့ပြင်များအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ NUGEN အသံဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုထင်ဟပ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်, အချိန်ချွေတာစရိတ်များလျှော့ချသဖြင့်, ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်သူကပိုမိုလွယ်ကူ High-အရည်အသွေး, လိုက်နာအသံမကယ်မလွှတ်စေ။ NUGEN အသံရဲ့အသံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကိရိယာများ, အသံကျယ်မီတာ / mastering ရောစပ်နှင့်ခြေရာခံခြင်းကမ္ဘာ့အသံလွှင့်အတွက်ထိပ်တန်းအမည်များ, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် nugenaudio.com.
လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-10-15
ယခင်: Ariana Grande ၏ Sweetener World Tour အတွက်ဆန်းသစ်သောဗွီဒီယိုကိုဖျောက်ထားသည့်ဖြေရှင်းနည်းများ
နောက်တစ်ခု: Cobalt Digital သည် Ciro Noronha အားအင်ဂျင်နီယာအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်မြှင့်တင်ပေးသည်